हाँस्दा हुन्छ तनाव कम, डिप्रेसन र तनाव लिने बिरामीहरुका लागी हाँस्नु औषधी नै हो – Sandesh Press
November 12, 2021 103
काठमाडौं । तपाई कतिको हाँस्नु हुन्छ ? हाँस्दा स्वास्थ्यलाई निकै फाईदा हुन्छ । कतिलाई थाहा होला , हाँस्दा के के कुरामा फाईदा हुन्छ भनेर । तर कतिलाई थाहा नहुन सक्छ । हाँस्दा शरीररको कुन कुन अंगमा फाईदा पुग्छ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौ ।
हाँस्दा तनाव कम हुने भएकाले गर्दा यसले सर्वप्रथम शरीर र दिमागलाई फाईदा पूर्याउने काम गर्दछ । धेरै हाँस्ने मानिसलाई राती मिठो निन्द्रा समेत लाग्छ । हाँस्दा एन्टीबडी बन्ने कोशिकाको संख्या बढ्ने गर्छ । जसको कारणले गर्दा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा बुद्धि हुन्छ ।
मज्जाले हाँस्दा शरीरको रक्तसंचार नियन्त्रणमा रहन्छ । खुलेर हाँसेको अवस्थामा शरीरले धेरै मात्रामा अक्सिजन पाउँछ जसले धड्कनलाई नियन्त्रणमा राख्छ । धेरै हाँस्ने मानिस लामो समयसम्म जवान हुन सक्छ । त्यसैले हाँस्नु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ ।काठमाडौं । तपाई कतिको हाँस्नु हुन्छ ? हाँस्दा स्वास्थ्यलाई निकै फाईदा हुन्छ । कतिलाई थाहा होला , हाँस्दा के के कुरामा फाईदा हुन्छ भनेर । तर कतिलाई थाहा नहुन सक्छ । हाँस्दा शरीररको कुन कुन अंगमा फाईदा पुग्छ भन्ने कुरा आज बताउन गईरहेका छौ ।
मज्जाले हाँस्दा शरीरको रक्तसंचार नियन्त्रणमा रहन्छ । खुलेर हाँसेको अवस्थामा शरीरले धेरै मात्रामा अक्सिजन पाउँछ जसले धड्कनलाई नियन्त्रणमा राख्छ । धेरै हाँस्ने मानिस लामो समयसम्म जवान हुन सक्छ । त्यसैले हाँस्नु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ ।
Prevलाखौं सलाम यी ट्राफिकलाई ! सम्मान स्वरूप एउटा लाईक र सेर गरौं।
Nextआलु ब्यापारिसगँ भागेकी गिता सम्पर्कमा, आफू स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै मागिन् डि’भो’र्स(भिडियो हेर्नुस)